विन्डोज | मा पार्टिसन वा हार्ड ड्राइव लुकाउनुहोस् ग्याजेट समाचार
जब तपाइँ अफिसमा तपाइँको व्यक्तिगत कम्प्युटरलाई पूर्ण रूपमा एक्लै छोड्नुहुन्छ, तपाइँका धेरै सह-कामदारहरूले तपाइँको हार्ड ड्राइवमा कुनै एकमा सबै सामग्री अन्वेषण गरिरहेका हुन सक्छन्, जुन निजी र गोप्य हुन सक्छ। यस कारणले गर्दा यो जान्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ लुक्नको लागि केही तरिकाहरू दुबै ड्राइभ पत्र र उही हार्ड डिस्क (वा विभाजन) मा हामी अनुपस्थित छौं।
विन्डोजमा माइक्रोसफ्टले प्रस्ताव गरेको केहि नेटिभ फंक्शन्सको अस्तित्वको बाबजुद, तर तिनीहरू विभाजन वा हार्ड ड्राइभ लुकाउनको लागि समयको लगानीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, यस्तो अवस्था जुन कोही लामो समय र मेहनतको कारण पार गर्न चाहँदैन। यस कार्यलाई प्रत्येक क्षणमा प्रदर्शन गर्न। यस कारणका लागि, हामी अब तपाईंलाई केहि प्रयोग गर्न सिफारिस गर्नेछौं उपकरणहरू ताकि तपाईं छिटो र सजीलो लुकाउन सक्नुहुनेछ, तपाईले चाहानु हुने कुनै पनि डिस्क ड्राइभमा।
विन्डोजमा नेट ड्राइभ डिस्क ड्राइभ लुकाउनको लागि
मुख्य रूपमा विन्डोजमा त्यहाँ दुई नेटिभ प्रकार्यहरू हुन्छन् जसले तपाईंलाई विभाजन वा सम्पूर्ण हार्ड डिस्क लुकाउन सक्षम गर्दछ (अपरेटिंग प्रणालीमा सम्बन्धित एउटा बाहेक)। ती मध्ये एक of को अंश बनाउँदैछडिस्क प्रबन्धक«, जहाँ तपाईं कुनै पनि विभाजन चयन गर्न सक्नुहुन्छ ड्राइभ पत्र "हटाउनुहोस्"। तपाईं «को प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छफोल्डर विकल्पहरूThe ड्राइभ पत्र लुकाउनको लागि, जसले तपाईंलाई धेरै मद्दत गर्दैन किनभने हार्ड ड्राइभ अझै पनी अन्यको लागि दृश्यात्मक हुनेछ।
1. ड्राइभ प्रबन्धक
तपाईं यो उपकरण नि: शुल्क र विन्डोजमा स्थापना बिना नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ; पोर्टेबल हुनाले, तपाईं यसलाई USB फ्लैश ड्राइभबाट पनि चलाउन सक्नुहुनेछ, यस उपकरणको समान इन्टरफेसमा रहेको यसको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू।
एकचोटि तपाईंले यो कार्यान्वयन गर्नुभयो, सबै डिस्क एकाइहरू यस ईन्टरफेसमा देखा पर्नेछन्, ती मध्ये कुनै पनि छनौट गरेर र त्यसपछि विकल्पले तपाईंलाई "लुकाउनुहोस्" वा "शो" लाई मद्दत गर्दछ। असुविधा यो हो कि प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर पुन: सुरू गर्नुपर्दछ, परिवर्तनहरू प्रभाव पार्न सत्र बन्द गर्नुहोस्।
2. NoDrives व्यवस्थापक
यो उपकरण पोर्टेबल पनि छ, विन्डोज एक्सपी देखि लिएर संस्करण both२-बिट र बिट प्रणाली दुबैसँग मिल्दो छ।
एक पटक तपाईले यो चलाउनु भयो भने तपाईले इन्टरफेस पाउनु भयो जुन स्क्रीनशटमा मिल्दोजुल्दो छ जुन हामीले माथि राख्यौं। तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ बक्सहरू जाँच गर्नुहोस् जुन ड्राइभ अक्षरसँग मिल्दो छ तपाईं लुकाउन चाहनुहुन्छ र त्यसपछि "परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्"। तपाईं यसलाई पासवर्डमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंलाई कसैलाई यो समान अनुप्रयोग चलाउनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको अधिकार बिना हार्ड ड्राइभ पुनः सक्रिय पार्दछ।
यदि हामी केहि समय मा के गर्न को लागी प्रयास गरिरह्यौं (हार्ड ड्राइभ वा पार्टिसन लुकाएर) एकदम चाँडो प्रक्रियाको आवश्यक छ भने हामी यो अनुप्रयोगमा जान सक्दछौं।
हामीले पहिले उल्लेख गरेका अन्य विकल्पहरूको अभिनय गर्ने तरिकाको विपरित, हामी यहाँ dयुनिटको बाकस हटाउनुहोस् जुन हामी लुकाउन चाहन्छौं। जब हामी एप्लिकेसन चलाउँछौं, धेरै संख्यामा एकाइहरू प्रदर्शित हुनेछन्, जस मध्ये हामीले हाम्रो छनौट गर्नुपर्नेछ। यो उल्लेखनीय छ कि एकाइहरू अझै पनी "" छ? तिनीहरू वास्तवमै अवस्थित छैनन्। अब हामीले परिवर्तनहरू मात्र स्वीकार्नुपर्नेछ ताकि चयनित एकाई कुनै पनि समयमा देखा पर्दैन। प्रक्रिया रिभर्स गर्न हामीले केवल उही प्रक्रियालाई पछ्याउनु पर्छ तर "रिभर्समा"।
Dis. डिस्कपार्टको साथ ड्राइभ पत्र लुकाउनुहोस्
अर्को परम्परागत विधि जुन ती सबै व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुन सक्दछ जोसँग हामीले माथि उल्लेख गरेका अनुप्रयोगहरूमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन। एउटा कमाण्ड जुन हामीले «टर्मिनल with को साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। यद्यपि यो केही जटिल देखिन्छ, वास्तवमा प्रक्रिया सबैले सोचे भन्दा सरल छ:
कुञ्जी संयोजन बनाउनुहोस् «Win + R» र प्रकार «डिस्क पार्टRespective सम्बन्धित ठाउँमा।
प्रेस गर्नुहोस् «प्रविष्ट"।
अब लेख्नुहोस् «सूची भोल्यूमIdentify पहिचान गर्न «संख्याUnit एकाईको जुन हामी लुकाउन चाहन्छौं।
लेख्नुहोस् Vol भोल्यूम चयन गर्नुहोस् [x]Unit एकाई नम्बर hide x hide लुकाउन।
अन्तमा लेख्नुहोस् «हटाउन"।
युनिट सबैको आँखाबाट लुकाइएको छ, उही प्रक्रिया पछि यसलाई फेरि देखाउनको लागि सक्षम पार्दै writingअसाइन गर्नुहोस्The प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » Al विन्डोजमा हार्ड ड्राइभ वा पार्टिसन लुकाउनको लागि विकल्पहरू